Kunamata Points Kune Mukadzi anotya Mwari | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kune Mukadzi anotya Mwari
Nhasi tichave tichinangana nemaprayer points kumukadzi anotya Mwari. Sezvo nemukadzi wese kugara nemukadzi anotya Mwari, ndozvinoitawo kurota kwemurume wese kugara nemukadzi anotya Mwari. Kurwira kwemurume nemukadzi kwakatosiyana muwanano. Kunyangwe mukadzi achida murume anozovimbika kumhiko dzavo dzewanano, kuriritira mhuri uye asingazofuratire mhuri yake. Murume anodawo mukadzi asingazomusiye kana zvikepe zvadzika, mukadzi ane rurimi rwakachengetedzwa uye ane hunhu hunoratidza Mwari.
Kuroora mubatanidzwa unofadza kana iwe uine waunodanana naye. Nekudaro, inogona kuve gehena pasi pano kune vamwe vanhu pavanopinda mairi nevanhu vasiri ivo. Pakati pevose vanobatirana, mhando yemudiwa chero munhu waasinga gadzikise ndeye iyo isina kutya Mwari. Kana mukadzi asina kutya Mwari, zvakaipa zvinotenderwa. Izvi zvinotsanangura nei zvichikosha kuti murume wese agare nemukadzi anotya Mwari. Pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemurume kana achitsvaga mukadzi anotya Mwari, ngavakurumidze kuburitsa zvimwe zvezvinhu izvi tisati tapfuurira mukunamata.
3 Zvinhu Zvekuita Kuti Utore Mukadzi anotya Mwari
Ipa Hupenyu Hwako Kuna Kristu
Nhanho yekutanga kutora kuve mutendi. Iwe haugone kutsvaga hupfumi munzira yausiri yako. Nhanho yekutanga yekuwana mukadzi anotya Mwari kupa hupenyu hwako kuna Kristu Jesu. Iwe unofanirwa kupa zvese zvako kune ukuru hwaKristu Jesu, ipapo chete ndipo paunozoziva iye munhu anonzi Mwari zvirinani.
Hakuna zivo yaMwari kunze kwaKristu Jesu. Iyo portal iyo iwe yaunoziva yakadzika zvinhu zvaMwari ndeye kuburikidza nekutenda kuti Kristu ndiyo nzira kuna baba. Ukangokupa hupenyu kuti urarame uye wave nekutendeuka kwechokwadi, wave kukodzera kutanga kutsvaga kwako uye munamato wemukadzi anotya Mwari.
Izvi zvinogona kutaridza kusetsa, asi ndizvo zvazviri. Hauende kunotsvaga mukadzi anotya Mwari mukirabhu kana mubhawa. Nzvimbo yakanakisa yekuwana mukadzi ane hupenyu uye hunhu hwakavakirwa kuna Mwari muChechi. Zvinokufadza iwe kuziva kuti nhamba hombe yevanhu vanoenda kuchechi ndeyechikadzi.
Paunenge uchinamatira mukadzi anotya Mwari, haungogare kumba kumba mazuva ese kusanganisira maSvondo wakamirira kuti mukadzi auye achigogodza pasuo rako. Rugwaro runoti mubhuku ra Zvirevo 18:22 anowana mukadzi anowana chinhu chakanaka, uye anowana nyasha kubva kuna Jehovha. Pane nzvimbo yekutsvaga. Unofanira kuenda kunze kunotsvaga mukadzi. Ukangopa hupenyu hwako kuna Kristu, unotanga kukura muna Kristu. Iyo nzvimbo yekukura inoda kuti iwe uzvidye pachako neshoko raMwari. Imwe yedzakanakisa nzira dzekuwana izwi raMwari ndeye kuenda kuKereke inotenda kuBhaibheri.
Iva Munhu anotya Mwari
Unozokwezva mhando yemunhu zvauri. Kana uri murume anotya Mwari, uchakwezva mukadzi anotya Mwari semukadzi. Bhaibheri rinoti kutya ishe ndiko kutanga kwe uchenjeri. Mumwe waunotya Mwari, uchave nehuchenjeri hwekuziva mhando yemukadzi anotya Mwari futi.
Baba Tenzi, ndinokutendai nezuva rerufaro seino. Ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione zuva rino, ndinokutendai nekundipa mumwe mukana, mumwe mukana wekukushandirai zvakanyanya, mumwe mukana wekugadzirisa zvakaipa zvangu, mumwe mukana wekutevera nekukuzivai zvirinani, Ishe, zita renyu ngarikudzwe. Ishe, ndinonamata nhasi kuti mundiropafadze nemurume akanaka. Ini ndinoramba kugadzirisa zvishoma. Ndinonamata kuti utumire nzira yangu murume wawakagadzirira, murume wawakagadzirira kuti ave mupirisita wemhuri, uyo achamira akamirira mhuri, ndinonamata kuti iwe umutumire nzira yangu muzita raJesu.
Ishe, sekutaura kunoita rugwaro, kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Ndinonamatira mukadzi chaiye nehungwaru chaihwo hunobva kuna Mwari. Ndinonamatira mukadzi anokuziva kupfuura ini, mukadzi saDebhora, mukadzi saRute. Uyo anokutya kupfuura zvandinoita, mukadzi anozoshandira uye kuda zvinhu zvaMwari zvirinani, ndinonamata kuti umutumire yangu nzira muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinosangana nemhando dzose dzekunyengera, mhando dzese dzaJezebheri idzo muvengi akaronga kutumira nzira yangu, ndinovatsiura muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba raMwari Wemasimbaose rizoburitsa pachena zvisikwa zvese zvinonyengera kuti muvengi atumire nzira yangu kutambisa nguva yangu uye andiratidze gehena kutambudzwa pasi pano, ndinonamata kuti iye nndine nzvimbo mumoyo mangu muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamatira mukadzi anezvibereko kwandiri uye mudziyo wekukudzwa kwauri. Ndinokumbira kuti iwe undibatanidze pamwe nemukadzi wawakarongera hupenyu hwangu. Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundipe huchenjeri chaihwo hwekuita nemukadzi wamakandirongera. Ini ndinonamata kuti iwe undidzidzise iyo chaiyo mhando yekupindura yekupa, ndinonamata kuti iwe uchengetedze rurimi rwangu nekuzvipira kwese, ndinonamata kuti iwe uzadze muromo wangu nehungwaru hunodiwa kuti upe mhinduro chaiyo muzita re Jesu.
Ishe, ndinonamata kuti mugadzirire mukadzi anotya Mwari uyu nehungwaru chaihwo hwaanoda kuve mudzimai mukuru. Ini ndinokunda mweya wehasha maari, ndinotsiura mweya wemhirizhonga maari nemvumo muzita raJesus.
Ishe, ndinonamata nhasi kuti muchandiropafadza nemurume akanaka. Ini ndinoramba kugadzirisa zvishoma. Ndinonamata kuti utumire nzira yangu mukadzi wawakagadzirira, mukadzi wawakagadzirira kuti ave mupirisita wemhuri, uyo achamira akamirira mhuri, ndinonamata kuti iwe umutumire nzira yangu muzita raJesu. Ishe, sekutaura kunoita rugwaro, kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Ndinonamatira mukadzi chaiye nehungwaru chaihwo hunobva kuna Mwari. Ndinonamatira mukadzi anokuziva kupfuura ini, murume anokutya kupfuura zvandinoita ini, mukadzi anozoshandira uye kuda zvinhu zvaMwari zvirinani, ndinonamata kuti umutumire nzira yangu muzita ra Jesus.
Ishe Jesu, ndinosangana nemhando dzose dzekunyengera, dzese nzira dzekuzviviga idzo dzakagadzirirwa nemuvengi kuti dziuye kwandiri. Ndinonamata kuti simba raMwari Wemasimbaose riburitse pachena zvisikwa zvese zvinonyengera kuti muvengi atumire nzira yangu kutambisa nguva yangu uye andiratidze gehena kutambudzwa pasi pano, ndinonamata kuti asazove nenzvimbo mumoyo mangu muzita zvaJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundidzidzise pazvinhu zvekuita. Ndinonamata kuti utungamire nhanho dzangu, ndinonamatira kubatana kwemweya pakati pangu nemurume iyeye, ndinonamata kuti iwe uite kuti chimwe chiitike pakati pedu muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundipe huchenjeri chaihwo hwekuita nemukadzi wamakandirongera. Ini ndinonamata kuti iwe undidzidzise iyo chaiyo mhando yekupindura yekupa, ndinonamata kuti iwe uchengetedze rurimi rwangu nekuzvipira kwese, ndinonamata kuti iwe uzadze muromo wangu nehungwaru hunodiwa kuti upe mhinduro chaiyo muzita re Jesu.
Mukadzi anotya Mwari
Previous nyayaKunamata Points Kumurume Anotya Mwari
inoteveraKunamata Kunongedzera Kuderedza Marwadzo
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kukanganiswa
Makumi maviri eminamato yekuparadza fibroids
20 minamato ine simba yehuMwari huchenjeri